Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Liberia » Opekempe, mmadụ 29 nwụrụ na ọgbaghara ekpere Liberia
Nkọwa gbasara ọdachi ahụ ka nwere nkọwa. Dị ka akụkọ mpaghara si kwuo, ihe omume ahụ bụ nnọkọ ekpere Ndị Kraịst - nke a maara na Liberia dị ka "agha agha ụgha" - nke a na-eme n'egwuregwu bọọlụ dị na New Kru Town, mpaghara ndị na-arụ ọrụ nke isi obodo.
Ndị uwe ojii Monrovia kwuru na opekata mpe mmadụ 29 nwụrụ n'ọgba aghara na nnọkọ ekpere Ndị Kraịst na isi obodo Liberia na Tọzdee, na enwere ụjọ na ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịbawanye.
Onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii Moses Carter kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ bụ nwa oge na “nwere ike ịbawanye” n'ihi na ọtụtụ mmadụ nọ n'ọnọdụ dị oke egwu. Ọ gbakwụnyere na agụnyere ụmụaka n'ime ndị nwụrụ anwụ.
Onye osote minista na-ahụ maka mgbasa ozi nke Liberia nyere otu ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ.
Jalawah Tonpo kwuru, sị, "Ndị dọkịta kwuru na mmadụ 29 nwụrụ na ụfọdụ nọ na ndepụta dị oke egwu," na-akpọ na redio steeti site na ụlọ ọgwụ dị nso.
"Nke a bụ ụbọchị mwute maka obodo a," Tonpo kwukwara.
Ndị mgbasa ozi mpaghara kwuru na Tọzdee na ọdachi ahụ mere n'abalị na nnọkọ a na-eme n'egwuregwu bọọlụ dị na New Kru Town, dị n'ebe ugwu Monrovia. Amabeghị ozugbo ihe butere ọgbaghara a.
Ọzọ na: Liberia
Transat na-akpọsa onye isi ọrụ ụgbọ elu ọhụrụ